Taurus Fryers Professional | Midkee la iibsanayaa? Fikradaha iyo Qiimaha
Raadinta shiilan qoto dheer ee Taurus ugu fiican? Waxaan kugu caawinaynaa doorashadaada! Waxaan kuu dooranay moodooyinka ugu caansan ee isticmaalayaasha, si aad u hesho midka ugu habboon baahiyaha gurigaaga.
Waxaan wajahaynaa astaan ​​u taagan qeybta ay tahay saamiga tayada / qiimaha weyn, sidaas darteed saliidda shiilaheyga ayaa la dareemi waayay ugu fiican ee ay kataloog. Waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad cabto go'aan iibsi wanaagsanAwoodaha, faa'iidooyinka, fikradaha, qalabka, iwm. Waxba ha seegin!
➤ Isbarbardhigga Taurus Fryers
Xirfadlaha 2 Plus
Xirfadlaha 3 Plus
Haanta la saari karo
Heerkulka ugu badan
Daboolka leh Visor
Waa maxay Taurus Fryer ugu fiican?
Waxaa ka mid ah xulashooyinka waaweyn ee ay bixiso astaantan, Waxaan dooranay oo kaliya kuwa ugu fiican in hoos looga hadlo.
▷ Taurus Professional 2 filter Plus
Xirfadlaha 2 oo lagu daray qiimaha
Saliid nadiif ah muddo dheer: shiil leh nidaam shaandhayn saliid si aad si fudud uga saarto wasakhda oo aad u hesho saliid nadiif ah muddo dheer
Nidaamkani wuxuu sidoo kale caawiyaa in la gaaro saliid nadiif ah, saliidda hoose ayaa sii ahaanaysa qabow oo sidaas awgeed waxay ka hortagtaa hadhaaga gubista iyo saliidda inay hesho dhadhan aan fiicnayn iyo udgoon.
Habka qaadista sanduuqa kaas oo kuu ogolaanaya inaad habayso booska dambiisha iyadoo loo eegayo cadadka cuntada la shiilay oo markaa ku guulaysato rasaas isku mid ah
Soo hel cunto saliid yar leh iyada oo ay ugu wacan tahay booska daadinta ee ka saari doona saliidda xad-dhaafka ah
Heerkulka shiilan ilaa 190º
Heer kulka: 150 °, 170 ° iyo 190 ° C
filter filter: Maya
Kuuba aan dhegta lahayn: Haa
Waxyaabaha lagu daro: Baskets, baaldi iyo dabool
Moodeelkan Taurus waxa uu leeyahay cabbir kooban oo ka qaadan doona meel aad u yar jikadaada, laakiin taas oo kuu ogolaanaysa in aad shiilto ilaa 600g oo cunto ah. Waxa ay ku daraysaa hab sifeyn ah oo saliiddaada ku ilaalin doona nadiif isticmaal kasta ka dib, markaa kama welweli doontid isku dhafka dhadhanka ee suxuuntaada.
Waad ku mahadsan tahay kala duwanaanta heerkulka isku dhafan waxay u fiican tahay dhammaan noocyada cuntada. Sidan, waxaad ku dhejin kartaa heerkulbeegga 150 ° C hilibka badda, 170 ° C hilibka iyo 190 ° C ee rootiga.
Waxay leedahay nidaamka qaadista sanduuqa, taas oo ay ugu mahadcelinayso taas oo ay suurtogal noqon doonto in la helo shiilan isku mid ah. Waa qalab si fudud loo nadiifin karo, maadaama qaybihiisa la guuri karo, waxaana lagu dhaqi karaa makiinada weelka lagu dhaqo (daboolada, dambiisha, baaldiga iyo jirka).
Taurus Professional 3 Plus qiimaha
Awoodda weyn iyo naqshadaynta is haysta waxay u diyaarisaa shiilan qoyska oo dhan iyada oo ay ugu wacan tahay awoodda weyn ee fryer, oo leh 3 l oo saliid ah oo kuu ogolaanaya inaad shiilto ilaa 1kg oo baradho ah; oo leh naqshad is haysta oo ah 35 x 21 x 22 cm
Awood leh oo ku habboon in lagu shiilo dabool leh; 2600 watts oo awood ah oo dammaanad qaadaya natiijooyinka ugu dhakhsaha badan; 1 kg oo baradho ah in ka yar 9 daqiiqo; dabool bir ah oo leh filtar iyo muraayado aragga; wuxuu yareeyaa qiiqa iyo urta
Heerkulka la hagaajin karo iyo halyeeyga karinta; waxay xakameysaa heerkulka shiilan inta u dhaxaysa 150 ilaa 190 darajo Celsius oo daboolaya dhammaan noocyada cuntada
Si buuxda loo saari karo; Dhammaan qaybaha fryer-ka waa la kala diri karaa, marka laga reebo guddiga kantaroolka iyo qaybaha korontada, waxaa lagu dhaqi karaa mashiinka weelka, nadiifinta sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Saliidda saliidda, aagga qabow iyo iska caabbinta biyaha hoostooda; Fryer leh nidaamka shaandhaynta saliidda si loo baabi'iyo dhammaan wasakhda iyo aagga qabow ee ka hortagaya isku dhafka dhadhanka; Hawlgalka iska caabbinta quusta ee shiilan dirayska
filter filter: Haa
Waxyaabaha lagu daro: Baaldi, dambiisha shiilan iyo dabool
Qaabkan Taurus, oo leh awood 3-litir ah, ayaa ku habboon in lagu kariyo ilaa 900 garaam oo cunto ah, isagoo ah ikhtiyaar ku habboon in ka badan laba qof. Waxay leedahay shaandhada saliidda, markaa ka sokow iska ilaalinta ur dhibta leh, waxay sidoo kale ilaalin doontaa nadiifinta saliidda muddo dheer.
Waad ku mahadsan tahay awooddeeda 2100 watt, shiilankaaga ayaa si dhakhso ah u diyaarsan doona, xitaa haddii aad u baahan tahay inaad mar kale shiilto, saliiddu way sii kululaan doontaa ilaa iyo inta aad u baahan tahay. Intaa waxaa dheer, si loo dammaanad qaado natiijooyinka ugu wanaagsan, waxay leedahay daaqad muraayad ah oo kuu ogolaanaysa inaad aragto heerka shiilan ee cuntadaada.
Habka nadiifinta ayaa noqon doona mid fudud oo fudud, maadaama ay leeyihiin qaybo birta ah oo la guuri karo iyo kuwa aan la taaban karin, waxay suurtogal noqon doontaa in lagu dhaqo gacanta ama mashiinka weelka.
▷ Taurus Professional 3 Compac
Qiimaha Xirfadlaha 3 Max
U diyaari cuntooyinka la shiilay ee qoyska oo dhan iyada oo ay ugu wacan tahay awoodda weyn ee fryer qoto dheer; oo leh 3 l oo saliid ah oo kuu ogolaanaya inaad shiil ilaa 1 kg oo baradho ah; oo leh naqshad is haysta oo ah 35 x 21 x 22 cm
2600 watts oo awood ah oo dammaanad qaadaya natiijada ugu dhakhsaha badan 1 kg oo baradho ah in ka yar 9 daqiiqo; hawlgal leh iska caabin quus ah oo dammaanad qaadaya cunto karis qumman oo isku mid ah
heerkulka la hagaajin karo laga bilaabo 150 ilaa 190 darajo; Kormeeraha shiilan waxaa ku jira halyeey ku saabsan heerkulka lagu taliyey ee cunto karis kasta
Dhammaan qaybaha fryer-ka waa la kala diri karaa, marka laga reebo guddiga xakamaynta iyo qaybaha korantada; Waxaa lagu dhaqi karaa weelka weelka; nadiifinta sida ugu fudud ee suurtogalka ah
Fryer leh aag qabow oo saliidda hoose ka dhigaysa mid qabow oo markaa ka ilaalisa hadhaaga inay gubato iyo saliidda inay hesho dhadhan aan fiicnayn ama ur, u oggolaanaysa in saliidda la isticmaalo marar badan.
Heerkulbeegga: Ilaa 190 ° C
Waxyaabaha lagu daro: Baaldi, dambiisha iyo daboolka
Waxaan wajahaynaa qalab awood leh oo awood u leh inuu fududeeyo diyaarinta suxuunta quruxda badan. Waxay isku daraysaa awoodda ilaa 3 litir oo saliid ah tiro wanaagsan oo qaadasho ah. Thanks to 2400W ee awoodda, waxay ku siin doontaa habka karinta degdega ah iyo heerkul deggan.
Waxay ku daraysaa shaandhada urta ee mas'uul ka ah bixinta jawi aad u wanaagsan jikadaada iyo daaqad hufan oo kuu ogolaan doonta inaad aragto sida cuntadaada loo shiilay. Si kastaba ha ahaatee, qaabkani kuma jiro shaandhada saliidda.
Heerkulku wuxuu gaaraa ugu badnaan 190 ° C, laakiin sidoo kale wuxuu isku daraa nidaamiye iyo saacad ilaa 30 daqiiqo. Habkan, ma noqon doonto lagama maarmaan in la kormeero habka karinta mar kasta.
▷ Taurus Professional 2 Plus 2 litir
Heerkulbeegga: Ugu badnaan 190 ° C
Waxyaabaha lagu daro: Baaldi, dabool iyo dambiisha
Kuwa u baahan inay shiil qoyska oo dhan, Taurus wuxuu keenaa qaabkan 4-litir, oo awood u leh inuu karinayo ilaa 1,2 kg oo baradho ah.
Laakiin maadaama awoodda aysan ahayn wax walba, waxay sidoo kale isku xireysaa awood dheeraad ah, oo gaareysa 2200 watts si ay u bixiso natiijooyinka ugu fiican. Waxa ay leedahay nidaam iska caabin ah oo quus ah, kaas oo ka hortagaya isku darka dhadhanka iyo ilaalinta saliidda nadiifka ah ka dib isticmaalka badan.
Nadiifinteedu aad bay u fududahay, maadaama ay tahay qalab gebi ahaanba la saari karo. Sidan, waxaan uga takhalusi karnaa qashinka iyo dufanka weelka weelka ama gacanta.
Marka la eego inta kale ee sifooyinkeeda, qalabkan kama heli doonno daaqad lagu kormeero karinta. Intaa waxaa dheer, ma lahaan doono filtar si loo yareeyo urta dhibka leh ee jikadayada.
➤ Qiimaha Fryers Taurus
Qiimaha qalabkani waa iyadoo loo eegayo kartidooda iyo tayadooda in ay bixiyaan, laakiin sidoo kale waxay ku saabsan tahay fursadaha hadhay ka hooseeya magacyo qaali ah sida Philips ama Tefal.
Sidaa darteed, haddii aad raadinayso a qiimo wanaagsan iyo astaamo aad u wanaagsan, moodooyinkani waxay buuxin karaan baahidaada laga bilaabo 40 euro.
Moodooyinka la falanqeeyay waxay leeyihiin awoodo wanaagsan, iyo saamiga tayada / qiimaha waxay ka dhigayaan kuwa ugu fiican. Intaa waxaa dheer, qiimeynta guud ee qalabkani waa wanaagsan yihiin, sidaas darteed waxay leeyihiin dhibco ah 4,4 marka loo eego 5.
Ahaanshaha astaan ​​la aqoonsan yahay ee qaybta, qalabkani waxa uu dammaanad qaadayaa natiijooyin wanaagsan oo ay aqbaleen macaamiil badan. Sidaa darteed, waxay ku saabsan tahay doorasho wanaagsan, sidoo kale iyada oo la tixgelinayo in ay leeyihiin dhowr sifo oo caadi ah oo ka mid ah moodooyinka qaaliga ah.
Qaybaha badbaadsan ee la saari karo iyo makiinada weelka lagu dhaqo
Saamiga qiimaha / tayada
Daabacaadda xariirta ayaa si fudud loo tirtiraa
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waxaanu ku caawin doonaa inaanu caddayno shakiyada ugu badan ee ku saabsan astaantan:
Waa maxay nidaamka sifaynta saliidda? Waa dambiil mas'uul ka ah qabashada hadhaaga hadhaaga gunta ka dib isticmaal kasta, si ay u ogolaato in saliidda dib loo isticmaalo muddo dheer.
Ilaa intee dammaanaddaadu tahay? 2 sano
Ma bilaash baa BPA ama Bisphenol A? Sí
Ma la celin karaa fiilada? Sí
Ma leedahay daaran/dami? Shaagagga heerkulku wuxuu u shaqeeyaa beddelaad ahaan
Intee in le'eg ayay fiilada korontadu jirtaa? Saldhigga 1
Maxaa baaldigu ka samaysan yahay? Acero lama-taaban karo
➤ Soo iibso Taurus Fryer
Haddii aad rabto inaad ka hesho mid ka mid ah moodooyinka astaantan qiimaha ugu fiican waxaad ku samayn kartaa online dukaanka khadka ee ugu weyn halkan:
Iibka ugu sarreeya
Taurus 973969 Deep Fryer ...
(Codadka: 1 Celcelis: 5)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Taurus